दु'खद खबर: जंगली बँदेल धपाउन छाडिएको करेन्ट लागेर दाजुभाइको नि’ध’न ! - Onlines Time
August 7, 2021 August 7, 2021 onlinestimeLeaveaComment on दु’खद खबर: जंगली बँदेल धपाउन छाडिएको करेन्ट लागेर दाजुभाइको नि’ध’न !
दु’खद खबर जंगली बँदेल धपाउन छाडिएको करेन्ट लागेर दाजुभाइको नि’ध’न !
“जंगली बँदेलको लागि छाडिएको करेन्ट लागेर बैतडीमा दुई जनाको ज्यान गएको छ ।निधन हुनेमा जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका ५ स्वालीका २१ वर्षीय सन्तोष चन्द र १८ वर्षीय अमृत चन्द रहेका छन् ।
करेन्ट लाग्ने बित्तिकै दुबै जनाको घटनास्थल मै मृ,त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुने दुवै जना सहोदर भाइ हुन्।घटनाको थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका इञ्चार्ज, प्रहरी निरीक्षक राजेश शाही नेतृत्वको टोली घटनास्थलतर्फ खटाइएको छ।
जिल्लाका सबैजसो स्थानमा लगाएको मकैबाली जंगली जनावरले नष्ट गर्न थालेकोले किसानहरुलाई मकै बाली जोगाउन धौधौ परेको छ ।
बुधबार राति ९ बजे तिर उनीहरूलाई करेन्ट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बोधराज ओझाले बताए । घटनाको थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनबाट प्रहरी टोली खटिएको छ।”
September 6, 2021 onlinestime